ဆီဖြည့်စက် - Micvd.com
၎င်းသည်ပလပ်စတစ်ပုလင်းများ၊ ဖန်ပုလင်းများနှင့်သတ္တုကွန်တိန်နာများတွင်ပင်ဆီဖြည့်ရာတွင်အဓိကအသုံးဝင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆီဖြည့်စက်များ၏အသုံးချမှုများတွင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီဖြည့်သည့်စက်၊ စားသုံးနိုင်သောဆီဖြည့်စက်၊ ချက်ပြုတ်သည့်ဆီဖြည့်သည့်စက်၊ ဒါ့အပြင်ဒီစက်မှာမယိုတဲ့အင်္ဂါရပ်များနှင့်သူတို့ပျံသန်းနိုင်အောင်ချိန်ညှိနိုင်စွမ်းအပါအ ၀ င်ကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ချက်များစွာရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစက်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်မကုန်ကျပါ။
ဟင်းရွက်ဆီ၊ အရည်၊ ဆံပင်ဆီ၊ လက်ဆေးခြင်း၊ သန့်စင်ပြီးဆီ၊ မုန်ညင်းဆီ၊ မြေပဲဆီ၊ အင်ဂျင်၊ ရေနံ၊ ဆီချောဆီ၊ ဆီဖြည့်စက် \_ t စားသုံးနိုင်သောဆီဖြည့်စက်၊ သန့်စင်ပြီးဆီဖြည့်စက်၊ မုန်ညင်းဆီဖြည့်စက်၊ ချက်ပြုတ်သောအဆီဖြည့်စက်၊ ဆီဖြည့်စက်များ၊ မော်တာဆီအဆာများကဲ့သို့သင့်တော်သောအမျိုးအစားများ \_ t စက်၊ ရေနံအဆာ၊ HDPE လုပ်စက်၊ ပလပ်နိုင်စက်၊ ဂျယ်ရီတွင်အဆာဖြည့်စက်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီဖြည့်စက်၊ မြေပဲဆီအလှည့်စက်၊ မုန်ညင်းဆီဖြည့်စက်များ၊ အင်ဂျင်ဆီဖြည့်စက်၊ မော်တော်ယာဉ်ဆီဖြည့်၊ ဂီယာဆီစက်၊ အအေး ဖြည့်စက်, ချောဆီဖြည့်စက်, ချောဆီကိုအဆာစက်, lube ဆီဖြည့်စက်, ဂီယာစုပ်စက်ဖြည့်, စီးဆင်းမှုမီတာ Filler, ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြည့်ရန်အောင်မြင်ရန်ခွင့်ပြု +/- 16% တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ပြန်လုပ်နိုင်မှု။
Autoamtic သံလွင်ဆီဖြည့်စက်သည်ပစ္စတင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးဖြည့်သည်မှာ 0.5% ဖြစ်သည်၊ 100ml မှ 5000ml သို့ဖြည့်သည့်ပမာဏသည်ကျွန်ုပ်တို့ nozzles ၂ ခုမှ 2nozzles PLC Controls၊ Touch Screen၊ အစားအစာအဆက်အသွယ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ သံမဏိနှင့် anodized များကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ အလူမီနီယံဆောက်လုပ်ရေး, ပေါင်းအများအပြားပိုပြီးအင်္ဂါရပ်များစံလာကြ၏။ ပုလင်းသံလွင်ဆီဖြည့် capping စက်, Glass ပုလင်းသံလွင်ဆီအဆာစက်
NPACK အလိုအလျှောက်သံလွင်ဆီဖြည့်စက်သည်အလှကုန်ပစ္စည်း၊ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဆေးဝါးနှင့်ရေနံလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသောမည်သည့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုမဆိုထိရောက်မှုရှိစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည်ပုလင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးချက်ပြုတ်ရန်ဆီ၊ သံလွင်ဆီ၊ မော်တာဆီများကိုအလိုအလျောက်ဖြည့်သည်။ အဆာထုထည်သည် 100ml-1000ml နှင့် 1000ml-5000ml ဖြစ်သည်။ သင်၏အမြောက်အများရှိသည့်တိုင်များမှပစ္စတင်များကိုကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းကိုအဆင့် -inding float၊ တိုက်ရိုက်ဆွဲခြင်းနှင့်ထူးခြားသောပုံစံမျိုးစုံသို့မဟုတ် recirculation နည်းလမ်းများအသုံးပြုသောကြားခံတိုင်နှင့်ပြုပြင်နိုင်သည်။
၁.၀၀၄ သံမဏိကိုယ်ထည်အလွန်လေးသောသံမဏိဂ C ကိုဘရွတ်။
၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်သံမဏိ၊ သန့်ရှင်းရေး၊ Teflon၊ Viton နှင့်သင်လိုအပ်သည့်အတိုင်းရေပိုက်များဖြစ်သည်။
3. တိကျသောအဆာထုထည်ပမာဏ - ၀.၅% နှင့်စုစုပေါင်းပုလင်းကောင်တာအတွင်း။
4. အဘယ်သူမျှမပုလင်းအဘယ်သူမျှမဝစွာ, PLC ထိန်းချုပ်မှု
ပုံစံ NP-VF အလိုအလျောက်သံလွင်ဆီဖြည့်စက်
ဖြည့်စွက်အသံအတိုးအကျယ် 100ml-1000ml နှင့် 1000ml-5000ml
မြန်နှုန်းဖြည့် 2000bottle / hour (6ml အတွက် nozz 1000 ခုနှုန်းဖြင့်)
စွမ်းအား 380V 50HZ / 60HZ 1.5KW
အတိုင်းအတာ 1800mm * 900mm * 2200mm
သငျ့လျြောသော ချက်ပြုတ်ခြင်း / ဆီ၊ မော်တာ၊ သံလွင်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အင်ဂျင်ဆီ၊ နေကြာဆီ
အမျိုးမျိုးသောပုလင်းအမျိုးအစားများအတွက် linear အမျိုးအစားကိုချိန်ညှိနိုင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အလိုအလျောက်အင်ဂျင်လောင်စာဆီဖြည့်စက်ကို ဦး ဆောင်နေသူဖြစ်သည်။ ကမ်းလှမ်းထားသောစက်အမျိုးအစားကိုအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကုန်ကြမ်းများ အသုံးပြု၍ ထုပ်ပိုးထားသောရေနံလုပ်ငန်းမှကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကြိုတင်နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်တီထွင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ထုပ်ကိုမျှတသောစျေးနှုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရေထုပ်ပိုးစက်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ဖောက်သည်များအားချက်ပြုတ်ရန်အတွက်ဆီဖြည့်သည့်စက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်နာမည်နှင့်ကျော်ကြားသည်။ ဆီဖြည့်စက်များသည် Flowmeter မှတိုင်းတာသောထုတ်ကုန်စွမ်းရည်အားဖြင့်အရည်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ စက်သည်အောက်ခြေမှဖြည့်သည့်တပ်ဆင်မှုနှင့်ချိန်ညှိနိုင်သည့်အသံပမာဏကိုတပ်ဆင်ထားသဖြင့်ဖြည့်ရန်အရှိန်သည်ဖြည့်ရမည့်ပမာဏနှင့်မတူပါ။ ကျနော်တို့ကစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီအရည်အသွေးအတိုင်းအတာကိုအသုံးပြုပြီးဒီစက်တွေထုတ်လုပ်။ ၎င်းသည်ညှိနိုင်သောအသံထိန်းချုပ်မှု၊ အောက်ခြေမှအဆာဖြည့်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အရှိန်နှုန်းသည်အသံပမာဏနှင့်ကွဲပြားသည်။ Flow meter မှထိန်းချုပ်ထားသော PLC မှတစ်ဆင့်ဤ ၀ င်သောစက်သည် volumetric နိမ့်ကျသောနိယာမတွင်အလုပ်လုပ်သည်။
304 သံမဏိမိုးသည်းထန်စွာတာဝန်သံမဏိကို C ဘောင် welded ။
အဆက်အသွယ်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်သံမဏိ၊ သန့်ရှင်းရေး၊ Teflon၊ Viton နှင့်သင့်လိုအပ်ချက်များအရရေပိုက်များဖြစ်သည်။
± 0.5% နှင့်တစ်ဦးစုစုပေါင်းပုလင်းကောင်တာအတွင်းတိကျသောအဆာအသံအတိုးအကျယ်, ။
အဘယ်သူမျှမပုလင်းအဘယ်သူမျှမဝစွာ, PLC ထိန်းချုပ်မှု
ပုံစံ NP-VF အလိုအလျောက်ဟင်းရွက်ဆီဖြည့်စက်
၁ အမျိုးမျိုးသောပုလင်းအမျိုးအစားများအတွက် Linear အမျိုးအစားကိုချိန်ညှိနိုင်သည်
၃ ပုလင်းမရှိ၊ အဆာမရှိ၊ အလိုအလျောက် PLC ထိန်းချုပ်မှု
4 Blocked Filling nozzs များသည်အစက်များ၊
±တိတိကျကျဖြည့်စွက်ပမာဏ, ± 5-0.5% အတွင်းနှင့်စုစုပေါင်းပုလင်းကောင်တာအတွင်း။
Autoamtic မော်တာ / အင်ဂျင်လောင်စာဆီစက်သည်ပစ္စတင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးဖြည့်သည်မှာ 0.5% ဖြစ်သည်။ 100ml မှ 5000ml မှပမာဏကိုဖြည့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် nozzles ၂ ခုမှ ၁၆ ခုသို့ PLC Controls၊ touch screen၊ အစားအစာအဆက်အသွယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ သံမဏိနှင့်အနိမ့်အနိမ့်အလူမီနီယံဆောက်လုပ်ရေးများအပြင်အခြားအင်္ဂါရပ်များစွာလည်းစံနှုန်းများဖြင့်လာသည်။
NPACK အလိုအလျောက်မော်တာ / အင်ဂျင်ဝိုင်လောင်စာဆီစက်သည်အလှကုန်ပစ္စည်း၊ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ ဓာတုဗေဒ၊ ဆေးဝါးနှင့်ရေနံလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသောမည်သည့်ထုတ်လုပ်မှုမျဉ်းကိုမဆိုထိရောက်မှုရှိစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီဇိုင်းသည်ပစ္စတင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးအလိုအလျောက် lube ဆီ၊ မော်တာဆီနှင့်အင်ဂျင်ဆီတို့ကိုပုလင်းထဲသို့ဖြည့်သည်။ အဆိုပါအဆာအသံအတိုးအကျယ် 10ml-5000ml ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အမြောက်အများကန်မှပစ္စတင်များသို့ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းကို level-sensing float၊ တိုက်ရိုက်မဲနှိုက်သည့်ထူးထူးခြားခြားပုံစံနှင့် recirculation နည်းလမ်းများအသုံးပြုသောကြားခံတိုင်နှင့်ပြုပြင်နိုင်သည်။
အလိုအလျောက် volumetric ပစ္စတင်စုပ်စက်ဖြည့်ထောက်ခံမှု။
အဆင့်မြင့် PLC ထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့်တိကျသောအလုပ်လုပ်ရန်အကြိမ်ရေထိန်းချုပ်မှု။
ဖြည့်စွမ်းရည်၏အဆင်ပြေ setting ကိုခွင့်ပြုသည်။
ပုံစံ NP-VF အလိုအလျောက်မော်တော်ယာဉ်ဆီဖြည့်စက်
သငျ့လျြောသော ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ ဆီ၊ မော်တာ၊ သံလွင်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အင်ဂျင်ဝိုင်
Mitsubishi သည် PLC စနစ်ကို T "ထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့်သယ်ဆောင်မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်ရန် VFD ထိန်းချုပ်မှုများပြုလုပ်သည်